Municipal WWTP - JDL Global Kuchengetedzwa Kwemamiriro ekunze, Inc.
Nzvimbo: Guta rePlymouth, USA
Treatment Kugona: 19m3/ d
WWTP Rudzi: Yakabatanidzwa FMBR Midziyo WWTP
Process: Mvura yakasviba → Kufungidzira → FMBR → Inopisa
Muna Kurume 2018, kuti uwane matekinoroji epamberi mumunda wekurapa kwemvura yakasviba uye kuzadzisa chinangwa chekudzora kushandiswa kwesimba kwemvura yemvura yakasviba, Massachusetts, senzvimbo yepasi rose yakachena yesimba, yakakumbira pachena matekinoroji ekucheka ekurapa kwemvura isina tsvina pasi rose. , iyo yakagarwa neMassachusetts yakachena simba centre (MASSCEC), uye ikaita hunyanzvi hwekuyedza tekinoroji munzvimbo yeruzhinji kana yakaremerwa nzvimbo yekurapa mvura yakasviba yeMassachusetts.
Iyo MA State Environmental Protection Agency yakaronga nyanzvi dzine hunyanzvi kuti dziitise kuongororwa kwakaomarara kwegore-kweye mabhenji emagetsi, fungidziro yekudzora kwekushandisa, zvirongwa zveinjiniya, uye zvakajairika zvinodiwa nezvinogadziriswa zvehunyanzvi. Muna Kurume 2019, hurumende yeMassachusetts yakazivisa kuti Jiangxi JDL Environmental Protection Co, Ltd.'s "FMBR Technology" yakasarudzwa ikapihwa mari yepamusoro ($ 150,000), uye mutyairi wendege achaitiswa kuPlymouth Airport Wastewater Treatment Plant mu Massachusetts.
Mvura inoyerera inorapwa nemidziyo yeFMBR inowanzo gadzikana kubvira pakaitwa chirongwa, uye avhareji kukosha kweimwe indekisi kuri nani pane kuburitswa kwenzvimbo (BOD≤30mg / L, TN≤10mg / L).
Ivhareji yekubvisa mwero weimwe index iri seinotevera:
Yese nitrogen: 93%
Lkuitika: Lianyungang Guta, China
Treatment Kugona: 130,000 m3/ d
WWTP Rudzi: Mhando yeMagetsi FMBR WWTP
Kuti tidzivirire nharaunda yezvakatipoteredza uye nekuratidzira kuoneka kweguta rinogarika uye rine maindasitiri emahombekombe, hurumende yemunharaunda yakasarudza tekinoroji yeFMBR kuti ivake nzvimbo yekuchengetera tsvina.
Zvakasiyana neyechinyakare yemaweji yekurapa tekinoroji iyo ine yakakura tsoka, kunhuwa kukuru, uye pamusoro-pevhu kuvaka mamiriro, iyo FMBR chirimwa inotora iyo ecological sewage yekurapa chirimwa kuvaka pfungwa ye "pamusoro penzvimbo yepaki uye yepasi pevhu yekurapa tsvina nzvimbo". Iyo yakagamuchirwa FMBR maitiro akabvisa iyo yekutanga sedimentation tangi, anaerobic tank, anoxic tank, aerobic tank, uye yechipiri sedimentation tangi yetsika maitiro, uye yakarerutsa maitiro kuyerera uye inoderedza zvakanyanya tsoka. Nzvimbo yese yekuchenesa tsvina yakavanzwa pasi pevhu. Mushure mekurasa kweseji kuburikidza nenzvimbo yepamberi pekurapa, nzvimbo yeFMBR, uye disinfection, inogona kuburitswa uye kushandiswa semvura yekudyara girini nenzvimbo ichisangana neyakajairwa. Sezvo kuburitswa kwekusara kweiyo organic sludge kuchideredzwa zvakanyanya neiyo FMBR tekinoroji, hapana kana kunhuhwirira, uye chirimwa chacho chakachengetedza nharaunda. Iyo nzvimbo yese yezvirimwa yakavakirwa munzvimbo yemvura yekuzorora, ichigadzira modhi nyowani yekurapa tsvina tsvina ine kuwirirana kwezvakatipoteredza uye kudzoreredza kushandiswazve kwemvura.
Lkuitika: Nanchang Guta, China
Treatment Kugona: 20,000 m3/ d
Kuti tigadzirise nharaunda nharaunda dzinokonzereswa netsvina yemumba, uye kunyatso kuvandudza mhando yemaguta emvura nharaunda, uye panguva imwecheteyo, tichifunga nezvezvakaipira zvetsika mishonga yekurapa tsvina, senge hombe nzvimbo yekugara, hwema hunorema, inoda kugara kure nenzvimbo yekugara uye hombe kudyara mupombi network, hurumende yemuno yakasarudza tekinoroji yeJDL FMBR yeprojekti, ndokutora pfungwa ye "Pakai pamusoro pevhu, nzvimbo dzekurapa pasi pevhu" kuvaka nyowani yekuchenesa tsvina tsvina ine yekurapa kwezuva nezuva 20,000 m3/ d. Nzvimbo yekuchenesa tsvina yakavakwa padyo nenzvimbo yekugara uye inovhara nzvimbo inosvika 6,667m chete2. Munguva yekuvhiya, hapana kana kunhuhwirira uye iyo yakasara yakasara sludge inoderedzwa zvakanyanya. Chimiro chose chemuti chakavanzwa pasi pevhu. Pasi, yakavakirwa mubindu remazuva ano reChinese, iro zvakare rinopa inoenderana nzvimbo yekuzorora yekugara kune vagari vakapoterera.
Nzvimbo: Huizhou Guta, China
Kurapa Unyanzvi: 20,000 m3/ d
WWTP Type: Yakabatanidzwa FMBR Midziyo WWTPs
Maitiro: Mvura yakasviba Mvura → Kufungidzira → FMBR → Yakachena
Iyo Coastal Park FMBR STP iri paHuizhou Guta. Iyo yakagadzirirwa dhizaini yekuchenesa mvura yemvura yakasviba ndeye 20,000m3/zuva. Chimiro chikuru cheWWTP tangi rekutora, tangi rekuyera, tangi yekuenzanisa, midziyo yeFMBR, tangi remvura inoyerera uye tangi yekuyera. Mvura yakasviba inowanzounganidzwa kubva kupaki yemahombekombe, yemvura chigadzirwa chiteshi chengarava, chiteshi chehove, dragon bay, Qianjin wharf nenzvimbo dzinogarwa pamhenderekedzo. IWWTP yakavakirwa pamhenderekedzo yegungwa, padyod kunzvimbo yekugara, ine chitsika chetsoka, mashoma akasara manyowa sludge achibuda uye hapana hwema mukuita kwemazuva ese, izvo zvisingakanganise nharaunda yakapoteredzwa.